दीपेन्द्रले हत्यापछि आत्महत्या गरेका थिए ? « रिपोर्टर्स नेपाल
दीपेन्द्रले हत्यापछि आत्महत्या गरेका थिए ?
रिपोर्टर्स नेपाल विशेषः तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाह रसिक थिए । उनी नाँचगानमा निकै सौखिन थिए । नेपालीपन खुबै मनपराउँथे । हाँस्ने र रमाउने स्वभावका दीपेन्द्रले एक्कासी आफ्नै परिवारका सदस्यको हत्या गरी आत्महत्या गरे भन्ने विषय धेरैका लागि आश्चर्यको विषय बन्यो । पत्याउनै कठिन घटना थियो त्यो ।
१९ जेष्ठ २०५८ मा तत्कालिन युवराज दीपेन्द्र शाह घाइते अवस्थामा सैनिक अस्पताल छाउनी पुर्याइएका थिए । कतिपयले उनको मृत्यु भइसकेको भनेका थिए । अस्पतालको बेडमै उनी राजा घोषित भए । गद्दीआरोहरण र राज्याभिषेक हुन नपाई केही दिनपछि मृत घोषणा गरियो ।
वीरेन्द्रको वंशनाशको रहस्य
औपचारिक छानविनले राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यासहित राजपरिवारका सदस्यहरुमाथि गोली चलाएपछि दीपेन्द्रले आत्महत्या गरेका थिए । तर, यसमा धेरै आशंका र प्रश्नहरु उठे ।
बाहिर फैलिएको हल्लाअनुसार दिपेन्द्रको देव्रे टाउकोमा गोलीको दाग थियो । अर्थात उनलाई गोली देव्रे टाउकोमा लागेको थियो । जबकि उनी दाहिने हात प्रयोग गर्थे । दाहिने हात चलाउनेले कसरी देव्रे टाउकोमा आफै गोली हान्न सक्छन् ? यसर्थ धेरैको विश्वास छ, दरबार काण्डमा दिपेन्द्रको संलग्नता बनावटी कुरा मात्र हुन् ।
धेरै नेपाली नागरिकहरू यसलाई रहस्यमय हत्याकाण्डकै रूपमा लिन्छन् । यस्ता दाबी समेत आएका छन् जसमा दुई व्यक्ति जसले युवराज दिपेन्द्रको मुखुण्डो लगाएका थिएले दरबार हत्या काण्डको विध्वसं मच्चाएका थिए । दरबार हत्याकाण्डमा दश राजपरिवार सदस्यको हत्या भएको थियो । यो आधुनिक नेपलाको कहालीलाग्दो र रहस्यमय घटना हो ।
सरकारी आधिकारिक भनाइअनुसार दिपेन्द्रले नै आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई आमसंहार गरेका थिए । किनभने उसको विवाहको बारेमा परिवारमा विवाद चुलिएको थियो । विवाद सृजनाले उनी अत्यन्त रूस्ट थिए । दिपेन्द्रको चाहना थियो दुलहीको रूपमा देवयानी राणालाई दरबार भित्याउने । देवयानी राणा राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाका छोरी हन् । राणा वेराज इतिहासमा पशुपती शम्शेर राणाहरू ‘ग’ वर्गका राणाहरू हुन् । राणा र शाह खानदानबीच वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुने एउटा परम्परा थियो । यद्यपि, राजपरिवारका शाहहरूले ‘क’ वर्गका राणाहरूस“ग मात्रै विवाह गर्दथे । ‘क’ श्रेणीका राणाहरूले आफूलाई श्री ३ घोषित गर्दै २००७ साल सम्म नेपालमा आफ्नो शाषन चलाएका थिए । जसलाई हामी १०४ वर्षको राणा शासन भनेर बुझ्दछौं । यी दुई महाराज वंशजहरूको नेपालमा वैवाहिक सम्वन्धको लामो इतिहास छ ।
सरकारी छानविन आयोगको भनाइअनुसार देवयानीसँग विवाह गर्ने दिपेन्द्रको चाहना विरूद्व उनकै आमा रानी ऐश्वर्य उभिएकी थिइन् । यसैकारण, दिपेन्द्रले नियमित शाहीभोजमा परिवारको हत्या गरिदिएका हुन् । उनले धेरै मादकपदार्थ पिएका थिए । मृतकहरूमध्ये दिपेन्द्रका बुवा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, आमा, भाइ र बहिनी पनि थिए । भनिन्छ— त्यसपछि दिपेन्द्रले आफ्नै टाउकोमा पेस्तोल पड्काए । दिपेन्द्रले तीन दिनसम्म कोमामा मृत्युसँग सङ्घर्ष गरे । यसै बेला अस्पतालको शैयामै उनलाई राजा घोषित गरिएको थियो । उनको जुन ४ मा मृत्यु भयो । लगत्तै उनका काका ज्ञानेन्द्र राजा भए ।
पुष्पलालः हाँसेरै बाँचे, हाँसेरै मरे
प्रदीप गिरी : पुष्पलाल श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक महासचिवका रुपमा चिनिनुहुन्छ । तर कुरो त्यत्ति
पुष्पलालका १२ आयाम
मोदनाथ प्रश्रित : नेपालको विभिन्न कम्युनिस्ट नेतामध्ये कमरेड पुष्पलालमा अनेक उल्लेख्य फरक विशेषता थिए । अध्ययन,
बिपी कोइरालाको शवयात्राको दुर्लभ भिडियो
सन्ताेष खडेरी : ३९ वर्षअघि आजकै दिन वि.सं. २०३९ साउन ०६ (तदनुसार सन् १९८२ जुलाई २१)
३१ वर्षमा २८ प्रधानमन्त्री, कसैको पनि ४ वर्ष कटेन
काठमाडौं, ५ साउन । नेपालमा २०४७ सालयता २८ पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको छ । तर,
बाबु र दाजुभन्दा पहिले यसरी ‘बेबी किङ’ भएका थिए ज्ञानेन्द्र
२००७ कात्तिक २१ गते बिहान ९.४५ बजे राजा त्रिभुवन, दुई बडामहारानी कान्ति र ईश्वरी, युवराज
राजकाजभन्दा रमझममै रमाउने राजा त्रिभुवन
नेपालको इतिहासमा ४३ वर्ष राजा भएका त्रिभुवन वीर विक्रम शाहको १ सय १६ औं जन्मजयन्ती
जसले सरकारको नेतृत्व गरे तर प्रधानमन्त्री भनिएन
२००७ देखि २०७८ सम्मको कालखण्डमा नेपालमा २७ जनाले सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को नेतृत्व गरे । तीमध्ये
मदन भण्डारीको मृत्यु ‘मिस्ट्री’ !
बाँचिरहेको भए नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले असार १४ मा ७० औं जन्मदिन मनाउने
श्रमिकलाई खोप पाउनै मुस्किल
काठमाडौं, साउन १० । दुई सातापछि रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया उड्न खोजेका स्याङ्जाका हरि राम्जालीले
७ हजार बढी मुद्दाबाट ४० करोड राजस्व
उदयपुर, साउन १० । १ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा आपराधिक